China Soft PVC Pin Badges orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Malefaka, miloko ary maivana kokoa ny tsimok'aretin'ny felana PVC malefaka. Ny labozia vita amin'ny Custom Custom dia tsara amin'ny vokatra fampiroboroboana marika, misy ambaratonga roa, endrika 3D ary sary famantarana vita pirinty amin'ny fomba manokana tsy manam-paharoa.
Ny marika marika dia matetika ampiasaina amin'ny fotoana samihafa toy ny sekoly, fety, fampiroboroboana, fahatsiarovana na fanomezana. Raha tsy tianao ny badge pin metal mangatsiaka dia ireo badge pin Soft Soft no tena tokony hofidinao. Ny maramara Pin Soft PVC dia malefaka kokoa amin'ny fahatsapana amin'ny tanana ary mamirapiratra kokoa noho ny lokon'ny vy. Maro ny volavolan-tsoratry ny badgeara vita amin'ny pvc malefaka no sary an'isa, noho izany dia raisin'ireo ankizy sy ny ray aman-dreniny izy ireo. Ireo logo dia azo amboarina amin'ny antsipiriany kely toy ny famenoana loko, fanaovana pirinty fanampiny vita pirinty sns. Ny habe dia mety ho kely na lehibe, ny endrika dia azo atao arakaraka ny angatahinao.
Ny badge Pin Soft PVC dia mora kokoa ary mety kokoa amin'ny fampiroboroboana. Ny marika feno marika Soft PVC pin miaraka amina endrika samihafa dia malaza amin'ny tanora amin'ny fananganana na fananganana ekipa. Ny mari-pamantarana pin Soft PVC antsika dia tontolo iainana, afaka mandalo ny karazana fitakiana fitsapana rehetra. Hamaly ny fangatahanao tsy ny vidiny ihany fa ny kalitao koa. Ny haben'ny baiko isan-karazany dia raisina an-tanan-droa, ary ny kaomandy lehibe dia hahazo vidiny tsara kokoa.
Ny famolavolana badges PVC malefaka dia azo vitaina amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny kalitao avo lenta. Andro 1 ho an'ny asa-tanana famokarana, 5 ~ 7 andro ho an'ny santionany, 12 ~ 15 andro ho an'ny famokarana. Hanampy anao bebe kokoa amin'ny fanitarana marika izany. Ny maivana maivana dia manampy anao hitahiry ny vidin'ny fandefasana ihany koa. Homena serivisy tsara indrindra avy hatrany isaky ny mahazo ny fanontanianao izahay.
Safidy fametahana mahazatra: fametahana dibera vy na PVC dibera, tsimatra fiarovana, andriamby, visy ary voanjo, ary ny hafa isaky ny angatahinao
Teo aloha: Misintona Zipper PVC malefaka
Manaraka: Labels malefaka amin'ny PVC
badge pvc malefaka
paiso malemy pvc lapel
Pants malefaka vita amin'ny PVC